Roberto Segura. Akụkọ ndụ na ndị ama ama | Akwụkwọ ugbu a
Roberto Segura. Biography na ndị a ma ama
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Egwuregwu, Akụkọ ihe mere eme
Robert Segura bụ otu n'ime ndị mara mma ndị na -ese ihe nkiri nke afọ ọlaedo nke ihe ọchị na Spain. Ekwuola m ya ke ibuotikọ en̄wen, mana taa a na m arara nke a nye naanị. Onye okike nke Rigoberto Picaporte, nnukwu bachelor o Ndị isi Alcorcón na Pepon umengwụ, maka otuto ya, o nwere ọtụtụ agwa karịa ndị nke anyị nwere afọ anyị na -echeta nke ọma. Enwere nyocha ahụ.
Onye na -ese ihe na Catalan a bụ otu adịghị ike m yana Ibáñez, Escobar, RAF o Purita Campos. Amụrụ n'ime Badalona Na Febụwarị 14, 1927, ọ bụ onye edemede na onye na -ese ihe nkiri ma bụrụ nke ọgbọ mara mma nke ndị na -ese ihe nkiri 57 nwere ụlọ mbipụta akụkọ ifo. Bruguera. Ọ bụ n'afọ ahụ mgbe ọ na -adọta mkpuchi mbụ ya na agba wee bụrụ ọkachamara na usoro odide ọdịnala na gburugburu, nke na -egosi mgbe ọ na -eme ka ọha mmadụ Spain na -adị afọ 60 na 70. Ọ rutekwara na 80s na Nke Muchamarcha, nkọwa ntụgharị oge dabara adaba nke ndị otu enyi ya mbụ bidoro Otu egwu na -atọ ụtọ o Ndị otu ahụ.
Site na ọrụ aka mbụ, mgbe ọ dị afọ 14, o debara aha ya n'akwụkwọ Schoollọ akwụkwọ nka na nka nke Barcelona. Sitekwa ebe ahụ, mgbe ya na ndị nta akụkọ rụkọrọ ọrụ, ọ banyere n'ụlọ ihe nkiri Macián, nke ewepụtara maka imepụta usoro eserese. Ọ bụ oghere dị mkpa iji ruo Bruguera, ebe ọ zụlitere ọmarịcha ọrụ ya dị ka onye na -ese foto n'akụkụ aha kacha mma na nnukwu aha na ihe nkiri Spanish.
Ihe kacha masị m de Segura bụ, ewezuga ọrịa strok dị ike ma na -egosipụta na eserese ya, ọ dị mma ike igosi ọnọdụ ndị ahụ kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, n'ime ezinụlọ ndị na -atọ ọchị, enwere mmekọrịta chiri anya, ngosipụta nke ọha mmadụ nke ga -emepe na ọchịchị onye kwuo uche ya.
Agwa na usoro
Rigoberto Picaporte, nnukwu bachelor
Es ikekwe agwa ya kacha echeta. Kere ya n'ime 1957, ebe ọ pụtara na magazin ahụ Thumbelina. N'ihe ize ndụ nke ịdaba n'ụdị aghụghọ dị mfe n'ihi ọnọdụ onye na -emegide ya, Segura nyere ma mkpụrụedemede ma ọnọdụ ahụ nnukwu ihe ijuanya. Na agbanyeghị na ọ bụ onye furu efu ebighi ebi, oge ọ bụla anyị gụrụ ihe ọchị Rigoberto anyị na -eche na oge a ọ ga -adịrị ya mma. Eserese ya, nke nzere bachelọ nke etiti, torola eto karịa na-eto eto na enweghị mmasị, na ntachi obi ya n'ịlụ nwunye ya metụrụ ya n'ahụ. onye chọrọ ịlụ, Warbler Cencérrez, onye na -ebu carbine mgbe niile Dona Abelarda, nne ya. Yabụ, n'ezie, enweghị ụzọ.
Mana Segura, dị ka ọgbọ ahụ niile na -ese ihe nkiri, ga -arara onwe ya nye usoro dị iche iche n'otu oge ahụ iji kpata ihe e ji ebi ndụ na obere udo nke uche. Mgbalị ahụ nyekwara ha a ike na -enweghị atụ nke ahia ahụ. Na ọkwa nke nnukwu ụlọ akwụkwọ Europe, mana na -enwetaghị otu nnabata na ugwu mba ụwa niile.
Ndị isi nke Alcorcón na ndị umengwụ Pepon
Pụtara n'ime 1959 en Uncle Ndụ a na -echetakwa ha nke ukwuu. Enwere ike ikwu na ha ka nọ n'ọdịdị, n'ihi na onye enweghị ma ọ bụ mara nwanne nwanne Pepon? Ma ọ bụ na Pepón bụ nrọ ọjọọ Arturo Alcorcon, onye na -arụ ọrụ n'ọfịs nwere oke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, onye ga -emeso ya ihe, onye umengwụ umengwụ onye, ​​ka ọ ga -emecha nweta Arturo, nwere nchekwa nwanne ya nwanyị, onye na -azụ ya ma na -echebe ya.
Ndị otu egwu - The Panda - Los Muchamarcha's
Maka ndị na -agụ akwụkwọ na -eto eto, enwere ndị otu ndị enyi a na usoro ihe ụmụaka na ntorobịa ha nke Segura na -agbanwe n'ime afọ na ọnọdụ mmekọrịta.
Piluca, nwa agbọghọ nke oge a (1959) - lily (1970)
Ikekwe ndị ọkacha mmasị m, ha bụ ihe okike ya na -elebara ndị na -ege ntị nwanyị anya na -agụ akwụkwọ akụkọ dị ka Lily. Ọ kọrọ ihe omume na ihe ọjọọ nke ụmụ agbọghọ abụọ nwere agwa na ọnọdụ yiri ya.
Ihe odide ndị ọzọ bụkwaCaptain Serafin na nwa nwoke ụlọ ya Diabolin o Pepe Barrena ma ọ bụ Laurita Bombón, odeakwụkwọ ntuziaka.
Nchekwa gafere na Premià de Mar, na Disemba 2008.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Egwuregwu » Roberto Segura. Biography na ndị a ma ama
Rafa Melero. Ajụjụ ọnụ gị na onye edemede nke Nkwekọrịta nkwekọrịta